आलुका फाईदाहरु बुझी राखौँ । – Ram Kumar Pariyar
Next अबुधाबिबाट उड्यो तेल बिनै उड्ने विमान
Previous मनपरेको कार्टुन
जानकारी · २०७१ फाल्गुन २४ 0
आलुका फाईदाहरु बुझी राखौँ ।
रामकुमार परियार |	२०७१ फाल्गुन २४
के तपाईंले कहिल्यै आलु खानु भएको छ ? अहँ,छैन भन्ने सायदै भेटिएला । यो संसारभरी नै लोकप्रिय खाना हो । आलु जेसँग पनि मिल्ने भएका कारण पनि यो लोकप्रिय खाना बनेको हो । यसलाई विविध परिकार बनाएर स्वाद लिन सकिन्छ । हामी प्रायः दिन्हुँ विभिन्न रूपमा यसको उपभोग गरि रहेका हुन्छौँ । तर यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि निक्कै राम्रो खाना हो भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । आलुमा हुने गुणको विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१. प्रयाप्त पोटासियम
आलुमा केरामा भन्दा बढी मात्रामा पोटासियमको मात्रा हुन्छ । एउटा आलुमा कम्तिमा १६०० मिलिग्राम पोटासियम पाइन्छ । जवकी एक दिनका लागि केवल ८०० ग्राम मात्र पोटासियम मानव शरीरका लागि प्रयाप्त हुन्छ । केरा खाने भन्दा आलु खाने मान्छेले धेरै पोटासियम प्राप्त गर्न सक्छ । पोटासियम मुटुको समस्या, मस्तिस्क घात रोक्न मद्दत गर्छ ।
२. फाइवरको मात्रा उच्च
आलुमा पाचन प्रणाली सहज तुल्याउन आवश्यक पर्ने फाइवरको मात्र उच्च हुन्छ । शरीरका लागि आवश्यक पर्ने फाइवरको लागि आलुको सेवन निक्कै हितकारी हुन्छ । आलुले मोटो पन नियन्त्रणका लागि पनि सघाउछ । आलुले कोलस्टोरलको समस्या र रगतमा सुगरको मात्रा नियन्त्रण गर्छ ।
३. सुन्तालामा भन्दा बढी भिटामिन सी
आलुमा भिटामिन सीको मात्रा उच्च हुन्छ । दिनमा एउटा आलु सेवन गर्दा यसले शरीरका लागि आवश्यक पर्ने भिटामिन सीको आधा मात्रा दिन्छ । जुन पुरै पाकोको सुन्तालाको भन्दा बढी हो । शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता विकाश गर्नका लागि भिटामिन सीको मात्रा आवश्यक हुन्छ । केही अध्यनले आलुले क्यानसरसँग लड्ने क्षमता समेत विकाश गर्ने देखाएका छन् ।
४. म्याग्नेसीको राम्रो श्रोत
आलु हाम्रो शरीरमा नभै नहुने अर्को खनिज म्याग्नेसीको राम्रो श्रोत हो । शरीर स्वस्थ राख्नका लागि यो खनिज अत्यावश्यक मानिन्छ । एउटा आलुमा एक दिनमा शरीरलाई चाहिने ३३ प्रतिशत म्याग्नेसि पाइन्छ । शरीरमा पाचन प्रणाली ठिक राख्न म्याग्नेसी अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसले क्यान्सर र मुटुको रोगबाट बचाउने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
५. भिटामिन B6 को श्रोत
आलुमा शरीरमा आवश्यक पर्ने भिटामिन B6को उच्च मात्रा हुन्छ । एउटा मात्र आलुको सेवनले दिनमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने ४६ प्रतिशत भिटामिन B6 प्रदान गर्छ । शरीरमा भिटामिन भिटामिन B6 अत्यन्तै आवश्यक छ । यसले शरीरका मांसपेसीलाई स्वस्थ राख्न र कोलस्टोरलको लेभल पनि नियमित बनाउँछ । दिमाग स्वस्थ राख्न पनि यो भिटामिन महत्वपुर्ण मानिन्छ ।
भुकम्पमा परि मर्नेको संख्या ५००० नाघ्यो
आज गएको भुकम्पमा २५ जना पुरिए